Ciidanka Booliska Boosaaso oo qabtay nin dil ka geystay Boosaaso
August 12, 2019 - Written by Editor
Boosaaso:-Waxaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari nin u dhashay dalka Kenya oo u shaqayn jiray shirkadda kalluumaysiga Ocean waxaan dilkiisa geystay askari ilaalo u ahaa.
Taliyaha booliska qeybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud oo waraysi siiyey idaacadda VOA ayaa u xaqiijiyey in dilka uu geystay askari ilaalo u ahaa shirkada kaluumaysiga ee Ocean haddan ay ciidanka amaanka Boosaaso ay qabteen.
Taliyaha booliska qeybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud oo wax laga wiidiiyey qarax ka dhacay Boosaaso saaka uu wax weyn oo dhib ah geysan marka laga reebo hal askari uu firir ka soo gaaray oo goobta qarax uu ka dhacay ku dhawaa xili uu marayey.
Dhinac kale 4 nin oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka
Al-shabaab kana soo yimid magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa ciidanka amniga Puntland ee magaalada Badhan ee Gobolka Sanaag ay ku amreen in ay joogsadaan ka dibna waxaa ay isku dayeen in ay baxsadaan bar kontrool oo ay ciidanku lahaayeen ka dibna ciidanka ayaa toogasho ku dilay mid ka mid ah 4tii xubnood halka seddexdii kale gacanta lagu dhigay.
Saraakiisha amniga magaalada Badhan ee Gobolka Sanaag oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in xubnaha la qabtay ay u socdeen Buuraha Calmadow iyagoona siday agab kale duwan oo ay ka mid yhiin Kabo haddana ay ku xiran yhiin saldhig ku yaal degmada Badhan.